Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Saint Lucia » Saint Lucia dia manenjika ireo mpitsidika amin'ny 'saram-pizahan-tany fizahan-tany' vaovao
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Resorts • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanambara ny Governemanta Saint Lucia fa, aorian'ny fakan-kevitra amin'ireo mpiray antoka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany dia hampiditra saram-pizahan-tany vaovao ho an'ny fizahan-tany izy ireo.
Hatramin'ny 1 aprily 2020, ny mpitsidika mpitsidika any Saint Lucia dia takiana mba handoavana saram-ponenana amin'ny fijanonany amin'ny alina any amin'ny nosy.
Ny mpamatsy trano rehetra eto amin'ny nosy (trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, villa, trano sns) dia takiana mba hanangona avy amin'ny fijanonany ho an'ny vahiny US $ 3.00 sy US $ 6.00 avy amin'ny taha isan-kariva eto ambany na mihoatra ny $ 120 $.
Ny fandoavam-bola dia haloan'ny mpitsidika mijanona ary angonin'ireo mpanome trano fampiantranoana izay hamerina ny sarany voangona amin'ny governemanta amin'ny alàlan'ny Fahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia.
Ireo vahiny ao amin'ny serivisy fampiantranoana dia nalaina tamin'ny alàlan'ny sehatra fizarana toy ny Airbnb ary ny VRBO dia iharan'ny onitra 7% amin'ny vidin'ny fijanonana.
Ny saram-pizahan-tany ho an'ny mpizahatany dia hampiasaina hamatsiana ny asa fivarotana ataon'ireo Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) satria mampiroborobo ny vokatra fizahan-tany any Saint Lucia manerantany ary indrindra amin'ny tsena lehibe ao Etazonia, Kanada, Karaiba, Fanjakana Mitambatra ary Eropa. .
Ny sarany koa dia hampiasaina hanohanana ny fampandrosoana ny fizahan-tany any ambanivohitra, ary ny fitantanana ny toerana sy ny fampandrosoana ny vokatra eo an-toerana any Saint Lucia. Ny tanjona dia ny hanamafisana ny fahafahan'ny SLTA hampiakatra ny varotra ny toerana aleha ary hanohana ny fampandrosoana ny fizahantany any Saint Lucia miaraka amin'ny fanangonana sarany izay mifandraika amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika.
Saint Lucia dia manintona mpitsidika mihoatra ny 350,000 any amin'ny morony isan-taona. SLTA dia nametraka tanjona 541,000 mpitsidika hijanona amin'ny taona 2022. Ny SLTA dia te hampitombo ny fahafahan'ny seza fiaramanidina sy ny enta-mavesatra amin'ny sidina rehetra mankany Saint Lucia ka hatramin'ny 85%. SLTA dia miasa ihany koa amin'ny fampitomboana ny fahafantarana ny marika Saint Lucia. Ny teti-bolan'ny SLTA isan-taona amin'ny marketing sy fampiroboroboana dia eo amin'ny $ 35 tapitrisa.
Ny asa fampiroboroboana ny fizahan-tany fizahan-tany dia lasa miha fanamby sy mifaninana tokoa satria ny firenena manerantany manandrana maka ampahany betsaka amin'ny tsena fizahan-tany mihombo. Raha jerena izany dia fanaon'ny firenena ankehitriny ny mamatsy ara-bola ny varotra ny vokatra fizahan-tany amin'ny alàlan'ny saram-pialofana na haba aloakan'ny mpitsidika any amin'ny toerana haleha.
Toerana itodiana betsaka kokoa miaraka amin'ny loharanon-karena lehibe lavitra noho i Saint Lucia toa an'i Canada, Etazonia ary Italia dia samy mampiasa ny saram-ponenana ho an'ny tanjona marketing. Ankoatr'izay, firenena Karaiba maro toa an'i Jamaica, Barbados ary Belize ary ireo ao amin'ny OECS ao anatin'izany i Anguilla, Antigua ary Barbuda, St. Kitts ary Nevis ary Saint Vincent ary ny Grenadines, dia nametraka hetra amin'ny trano fonenana. Ireo lozika ireo dia matetika apetaka amin'ny efi-trano iray, isan-kariva ary indraindray mihenjana (miorina amin'ny ambaratonga) miorina amin'ny karazana fananana. Araka ny voalamina, ny saram-pizahantany mpizahatany ao Saint Lucia no anisan'ny ambany indrindra amin'ny OECS sy ny CARICOM, ary ny toerana fizahan-tany efa tafaorina tsara manerantany. Ny endrik'i Saint Lucia dia mitovy amin'ny Maldives.
Ny manam-pahefana fizahan-tany Saint Lucia dia mametraka dingana ahafahan'ny mpamatsy trano ao amin'ny nosy, mpandraharaha mpizaha tany iraisam-pirenena ary tranokala famandrihana hamerina mora ny sarany azon'izy ireo amin'ireo vahiny mipetraka. Ny rafitra dia manana rafitra miorina hanamarinana fa marina ny fampahalalana omena. Raha jerena fa hampiasaina ny rafitra mandeha ho azy amin'ny famoahana ny sarany nangonina avy amin'ny vahiny, dia halefaka ny vola lany amin'ny mpamatsy trano.
Ny minisitry ny fizahantany Hon. Dominic Fedee dia nilaza fa ny marketing amin'ny toeran-tsoa dia mahasoa ny mpilalao rehetra amin'ny indostria - mpamatsy trano, seranam-piaramanidina, mpandraharaha fizahan-tany, mpiasan'ny dia, mpikarakara tany, tranokala ary toerana manintona. Nanohy ny fanamarihany koa izy hoe: "Fanamby ho an'ny firenena madinidinika foana ny manaparitaka loharano tena ilaina amin'ny marketing amin'ny fizahantany. Ny saram-ponenana dia mamela ny fizahan-tany handoa ho an'ny tenany, satria ny hetra dia alaina amin'ny mpizahatany ao amin'ilay nosy. Manafaka vola be dia be ilaina amin'ny fitsaboana, fanabeazana ary filaminam-pirenena izy ity. ”